Hartmann's Mountain Zebra - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Akukho mvelaphi ephawulekayo phakathi kwezesondo, ngaphandle kokuba amadoda makhulu anzima kwaye anesilinganiso se-298 kg, xa kuthelekiswa ne-276 kg yeeyure. Amagundane angaphezu kweeminyaka ezisixhenxe ubudala, anokulinganisela ubunzima obuyi-343 kg. Amagundane ama-1.5 anamagxa, enomsila ubude be-500 mm kunye neendlebe eziyi-280 mm ubude.
Ukuze ukwazi ukujamelana no bunzima behlabathi olunamatye, elityebileyo, iinkozo zeentlobo zikhula ngokukhawuleza kakhulu. Ukwahlukana phakathi kwale ngcali kunye ne-Cape Mountain Zebra ngokuyinhloko kuphela ngobukhulu, okokugqibela kuncinane. Kukho umkhwa wokuba umgca omhlotshana ube mkhulu kuno mgca kunoko lweentlobo zeNtaba yaseKapa.
Njengazo zonke-ii-equids, eli yi-grazer echitha inxalenye engcono kakhulu yokutya kwosuku. Indlela yokudla ilandele ukulandelelanisa imida yeendawo, apho ukuqhubela phambili kokutya kufaka ukuhamba kwipateni ye-zig-zag phambili.
Lo akusiyo umzalisi wexesha ukususela ekubeni izilwanyana ziza kuzalwa unyaka wonke, nangona zihlala ziphakamileyo ngexesha lezimvula. Iifama leMarra ngokokuqala ngqa kwiminyaka emithathu. Iintsiba zi-25 kg ngexesha lokuzalwa. Ixesha lokuthobela lixesha eli malunga neenyanga ezili-12. Iintsiba zinomlinganiselo ophezulu wokusinda, mhlawumbi kuba abantu abadala emhlambini bayazikhusela ngokuzikhuselekileyo. Iintlanuli zisebenza ngokwesondo malunga neminyaka emithathu ubudala.
Intaba yentaba kwinyango.Kubantu abemi kukho amaqela ahlukeneyo asekuhlaleni, oko kukuzaliswa kweenkomo kunye namaqela e-bachelor. Amaqela azalisayo aqukethe i-stallion enye kunye nama-mares, oku okugqibela kunye nolawulo olukhethiweyo loluntu.
Njengoko kuthethwe ngegama lomenzi weelwimi, i-zebra yentaba yeHartman ifanelwe ukuba ibe yindawo enqabileyo, i-eccarpment ephukile, apho iinkomo zithembela kwiindawo ezinomthombo wamanzi angapheliyo kunye neentlobo ezahlukeneyo zobuncwane bokutya ukuze kugcinwe ukuhluma kwabantu.
Iimbali ezimbini zeentaba zasendle zasendle. Le equid ifunyenwe kwimimandla esentshonalanga eneemimandla zaseNamibia, ukusuka apho iya kwi-Angola. Iyakunqanda ukusasazwa kwiphondo laseKunene ngasemzantsi nakwempuma, njengoko kuboniswe kwimephu yokuhambisa. Okwangoku inani labantu liqikelelwa kuma-13 000.
Ukucocwa - Iinyanga ezili-10
Ukukhula koSondo - iminyaka eyi-2
Umsebenzi wobomi - Ubuncinane ubuneminyaka engama-25
Isimo - I-Hartman's Mountain Zebra njengeentlobo zihlelwa njengengozi, kunye no-E. z. Hartmannae no-E. z. Idiza iyawela phantsi kweloluhlu olufanayo.
Kukho umgca oqinileyo wengqondo ngabanye abagcini bezilondolozi ukuba i-Zebra Mountain Zebra kunye ne-Hartman's Mountain Zebra kufuneka zibe ziintlobo ezahlukileyo ngenxa yokuhlukana kwendawo yokuhlala kodwa i-genetics ibonisa ukuba ezi zimbini zixhomekeke kakhulu.